Amarkii RW Khayre: “Qalbidhagax oo ah muwaadin Itoobiyan ah … xiriir dhowna la leh argagixisada ha lagu wareejiyo safiirka Itoobiya” (digreeto) – Radio Daljir
Noofember 22, 2018 5:19 g 0
Hoos ka daalaco amarkii RW Khayre ee wareejinta Qalbidhagax taariikhdu markii ay ahayd 18 Agoosto 2017 uu amray in muwaadin Qalbidhagax lagu wareejiyo Safiirka Itoobiya u fadhiya Soomaaliya.
Midi isweydiin ma leh oo shalay xukuumadda Madaxweyne Farmaajo iyo RW Khayre si sharci-darro ah bay wareegto ku qoreen oo muwaadin Soomaaliyeed ku wareejiyeen dowladda Itoobiya. Weli lama hayo wareegtadaas iyo cidda qortay.
Su’aalo kale isweydiin bay mudanyihiin: Warqaddu tii Qalbidhagax lagu wareejiyey ma tahay? Haddii maya, aaway tii runta ahayd, illeen sida kor ku cad isweydiin ma leh in Qalbidhagax dowlad cadowtooyo Soomaaliya ka dhaxayso ay xukuumaddu har cad ku wareejisay? Maxaa se kallifay in amarkaas RW Khayre maanta la shaaciyo?
Mid kale ayaa ah, maadaama taliyayaasha Hay’adda Nabad Sugidda ay yihiin rag xiriir dhow Madaxweyne Farmaajo la leh, ma lagu macnayn karaa in xiriirkii Farmaajo iyo Khayre uu maanta qar ka laalaado mise …?
Halkan RIIX oo akhri amarka RW Kheyre
Siyaasadda & Dhaqaalaha 410 Wararka 13859